Nezvedu - Xuzhou Huayan Gas Equipment Co., Ltd.
Nharembozha yekuzadza chiteshi
Containerized kugadzirwa kweokisijeni
High kuchena nitrogen jenareta
Gasi compression & kuzadza
Inodzokorora piston compressor
Oiri isina oxygen compressor
Gasi kuchengetedza & kuzadza
Xuzhou Huayan Gas Equipment Co., Ltd.,Inotungamira gasi compressors provider,Kambani ine muzinda kuXuzhou City, Jiangsu Province, China.Inovhara nzvimbo inosvika 91,260㎡,Kubva pakagadzirwa gasi compressors muna 1965,
Kambani yedu yakaunganidza hupfumi hwekugadzira uye ruzivo rwekugadzira, Iine nyanzvi yekugadzira, kukanda, kupisa kupisa, welding, machining, test yegungano uye humwe hunyanzvi hwekugadzira nekugadzirisa, Uye yakazara tekinoroji yekuyedza michina uye nzira, Tinogona kugadzira, kugadzira nekuisa zvigadzirwa zvinoenderana ne iyo parameters yevatengi.
Kuburitswa kwepagore kwe500 seti yeakasiyana gasi compressor akaumbwa.Parizvino, compressor outlet pressure inogadzirwa nekambani inogona kusvika kusvika 50MPa,Zvigadzirwa zvedu zvinofukidza minda yekudzivirira yenyika, aerospace, nuclear power, petrochemical and other fields.
Zvigadzirwa zvedu zvakatengeswa kunze kwenyika dzakawanda pasirese, Kunyanya: Indonesia, Egypt, Vietnam, South Korea, Thailand, Finland, Australia, Czech Republic, Ukraine, Russia nedzimwe nyika, Tinogona kupa yakakwana-kumira mhinduro kune yega yega. mutengi pasi rese, Kambani yedu inovimbisa kuti mutengi wese anovimbiswa nemhando yepamusoro zvigadzirwa uye yakanakisa sevhisi maitiro.
Zvinopfuura gumi gasi compressor chigadzirwa zvigadzirwa uye matsva anoshanda patents.
Zvigadzirwa zvinotengeswa kunze kwenyika dzinopfuura makumi maviri, Made in China, International Demand
Kambani yedu iri muXuzhou, China, Inovhara nzvimbo ye91,260 ㎡ uye nzvimbo yekuvaka ye55,497 ㎡.
Anopfuura makore makumi mashanu egasi compressor kugadzira ruzivo
Chikwata chehunyanzvi, ramba uchivandudza, gadzira emhando yepamusoro gasi compressor zvigadzirwa nemasevhisi, uye edza kusvika 100% kugutsikana kwevatengi.